Ithegi: ubeko lwephepha | Martech Zone
Ithegi: ubeko lwephepha
Kunyaka ophelileyo, bendisokola ukufumana isixhobo sefowuni esasilula, songezwa izixhobo zokusebenzisana, kwaye enezinto ezisebenzisanayo ezilinganisa indlela izinto ze-HTML nezinto ezisebenza ngayo. Ukukhangela kwam kwaphela ngeHotgloo. Ukusuka kwindawo yabo: IHotGloo sisicelo esityebileyo se-intanethi eyilelwe ukwakha iifowuni zomnxeba ezisebenzayo kwiwebhusayithi okanye kwiiprojekthi zewebhu. Yenza kwaye wabelane ngokusebenzisana ngokupheleleyo kwi-intanethi. Sebenzisana noogxa bakho kwaye nabelane ngemveliso nabathengi.